Boobka doorashada maxaa u xal ah? - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Boobka doorashada maxaa u xal ah?
Boobka doorashada maxaa u xal ah?
Dunida kale waxay eegayaan waxa ka socda Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed waxuu xaalkoodu marayaa “Allow dhan u bixi”balse siyaasiyiinta ayaa jilaya ruwaayad jiliinkeeda lasii ogyahay sida ay ku dhamaaneyso, waana boobka doorashada.
Weey adag tahay in Faallo lagu soo koobo heerka uu gaaray boobka lagu hayo doorashada Soomaaliya ee masiirka malaayiinta qaran iyo qurba joogta leh, balse aan soo yara koobno dhacdooyinka boobka muujinaya iyo laba geesoodka uu ka socda daadka la raacsiiyay aftidii shacabka.
Kahor dhammaadka muddo xileedka madaxda wali joogta, 2020-kii waxaa lagu hungoobay qabashada doorasho dadweyne qof iyo cod ah oo dalka laga qabto, taas badalkeed waxaa 17-kii September la ogyahay inuu soo baxay heshiiskii caanka baxay ee doorashada dad badan, isuna badashay doorashada boobka ah ee maanta socta.
Waagaas dad badan oo caqli u saaxiib ah waa sii ogaayeen in ay adagtahay isfahan doorasho daacad ah oo ka yimaada laba geesoodka isku heysta siyaasadda ee muxaafad iyo mucaarad, taasi oo ay sii xoojisay maamul goboleedyada dalka oo labada geesood kala jiray, laba toos loogu tiirinaayay in ay mucaarad ku yihiin madaxda federalka iyo sadex in ay taabacsanyihiin loo xisaabiyay.
Waxay keentay in doorashada oo inta ugu badan ka dhaceysa maamul goboleedyada ku bilaabato boob, kuma ekeyn oo kaliya aqalka sare sida ay dadka qaar filayeen balse waxaa xulsho iska soo horjeedda noqotay dhamaan doorashadii xildhibaanada oo hadda kala bar ku dhaw inta la soo saaray.
Shaki kuma jiro in sababta boobka iska soo horjeeda ay tahay in la boobo guud ahaan talada dalka. Waxaana isku heysta oo kala boobaya madax hadda joogta, kuwo horay usoo joogay iyo madaxda maamul goboleedyada oo mid walba damac gaar ah uu ku jiro.
Mar haddii boobka doorashada Soomaaliya uu noqday wax aan laga cabsan, laga xishoon, laga gamban oo baarlamaanka la soo geliyay rag horay ugu caan baxay dhacdooyin aan la mahdin, iyo dabeecado ka fog dowladnimada, dhalinyaro aan caqliga ka qaan gaarin iyo rag loogu soo saaray ku jebinta rag kale, oo waxa Soomaalidu u taqaan rag iska celis laga dhigay taladii dalka, sow ma muuqato in loo baahan yahay ka fekerka waxa xal u noqon kara doorashadan boobka ku socta ee u muuqata in ay sidaan ku dhamaaneyso.
Mar haddii xaaladdu taagan tahay xagee la maraa, ma sahlana wadadu waxaase jirta in qof walba uu si u arko xalka. In baarlamaanka soo galeen dadka aan la wada soconno haddana ay kursiga ugu sareeya doonayaan musharaxiin iska soo horjeedda oo waliba aad isu jeceb, kuna koobneyd mucaaradnimo oo kaliya waxaan la huri doonin in bulshadu ka fekerto badbaadinta qaranka.
Qarankan oo doorashada la boobay, waxaa sugeysa doorashada madaxweyne oo haddii aan laga fiirsan dhali karta xaalad xun oo dhulka la gasha dowladnimada.
Waxaa na sugeysa kala doorashada in ay xaaladdan iyo mid ka daran sii socto iyo in la daba qabto hambada yar ee ku hartay dowladnimada. Maanta inta badan waxaa noo muuqda musharaxiin is neceb oo xitaa ay adag tahay in midkii guuleysta ay aqbalaan inta kale, waxaa kale oo noo muuqda in baarlamaanka hadii aanu imaan qof isku wada kari uu noqon doono goob lagu dagaalo, aag lagu kala xirto la isuguna dhex hanjabo.
Gunaanadka waxaa talo iyo aragti looga baahan yahay muwaadin kasta, waxaase jirta in ragga is haya ee mucaarad iyo muxaafad leh maanta aanu midkood ka muuqan awoodda isku wadidda dowladnimada, mar hadii lagu kala qeyb sami karo natiijada ugu horeysa ee cod bixinta.
Previous articleXog-Rooble oo Rumeystay Digniin amni oo xafiiskiisa horay loo siiyay iyo Sarkaal Kashifay Weerarada.
Next articleWaa kuma siyaasi?